नेपाल हाइड्रो डेभलपरको एजिएम हुँदै, कहिले हुँदैछ बुक क्लोज ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेपाल हाइड्रो डेभलपरको एजिएम हुँदै, कहिले हुँदैछ बुक क्लोज ?
काठमाडौं - नेपाल हाइड्रो डेभलपरको वार्षिक साधारण सभा असार २९ गते गते हुने भएको छ । नेपाल हाइड्रोले सभा गर्नका लागि बुधबार बुक क्लोज(असार १३ गते) गर्न लागिएको हो । उक्त सभामा कम्पनीले सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न संस्थापक सेयरधनीबाट ३ जना र सर्वसाधारणबाट १ जना सञ्चालकको निर्वाचन हुनेछ ।
सभामा भाग लिन चाहनेले मंगलबारसम्ममा कम्पनीको सेयरधनी बनिसक्नुपर्नेछ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को वार्षिक प्रतिवेदन, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाहमा छलफल गर्ने प्रस्ताव पनि पेश हुनेछ । लाभांश प्रस्ताव भने छैन ।